1. Indlela yokunciphisa ubunzima bomzimba Kubalulekile ukuba sincede ubuso bethu bubukeke buhle kwaye bubukeka, kunye nomnyango oya entliziyweni oxelela abantu abakungqongileyo ukuba uzikhathalele kangakanani. Abantu abaninzi bazama ukufumana indlela yokulahla ubunzima bomzimba obusebenzayo. Kodwa kude kube ngoko!?! Ubuso obudumbileyo, ubuso obujikeleziweyo, izidlele ezityebileyo, intamo yentamo iya kuhlala nathi ixesha elide. Kuze kubangele inkxalabo kwabasetyhini Ngubani ofuna ukunciphisa ubunzima bomzimba kancinci Kodwa namhlanje ndingakuxelela lonto Uyazi kuphela ukuba unciphise ubuso bomzimba wakho (Ungabunciphisa njani ubunzima bomzimba) esiwuzisayo namhlanje. Ubuso bakho buya kuba mncinci Kude kube ngokwakho uya kuqaphela
2. Ukunciphisa ukusetyenziswa kwee-carbohydrate ezilula ezifana nerayisi emhlophe, iswekile ecoliweyo, amashwamshwam, i-ayisi khrim, njl. Yiyiphi eya kuba neqondo eliphezulu le-sodium Kubangela i-edema emzimbeni nakubuso Okanye ngubani oza kuphulukana nobunzima bobuso ngokutya i-carb esezantsi (Ukutya okuneeCarbs ezisezantsi) kukunciphisa ukutya okuphezulu. Kwaye ujike ekudleni okune-carb ephantsi kuphela kwiintsuku ezili-14 zilandelelana, siza kuqala ukuzibona ngokucacileyo iziphumo zokulahleka kobunzima bomzimba.
3. Zilolonge onke amalungu omzimba Umgaqo wesithupha wokulahla ubunzima bomzimba kukunyibilikisa amafutha amaninzi ebusweni bakho. Sinokuphulukana nobunzima bobuso ngemisebenzi etsala amandla kumafutha amaninzi Ngokuqhubeka nokuzilolonga imizuzu eli-15 ukubheka phambili Kwinqanaba lentliziyo le-130-150 beats ngomzuzu, oya kuthi uncede ukutshisa amanqatha omzimba kunye nezidlele ngokukuko. Xa yenziwe malunga neentsuku ezingama-30 zilandelelana ngokudibeneyo nokusetyenziswa kwee-carbohydrate ezilula. Iya kusinceda sinciphise ubunzima bomzimba ngokufanelekileyo.
4. I-Yoga yoBuso bamaFutha Ukutsha kweTekisi lamafutha Yindlela elula kakhulu yokulahla ubunzima bomzimba. Senza nje umlomo, iidick, izidlele kunye nemilebe. Emva koko jongisa intloko yakho emva. Ukolula intamo nesilevu, ukujonga isilingi ngokwenza imizuzu eli-10, amaxesha ali-15 yonke imihla, kusasa naphambi kokulala kangangeentsuku ezingama-30 ngokuqhubekayo, kuya kunceda ukunciphisa ubunzima ebusweni.
5. Ukuqinisa umyalezo Le ndlela yokunciphisa ubunzima bomzimba. Sisebenzisa nje indlela yobuso yokuthanjiswa edityaniswe ngentsasa yekrimu kunye nexesha lokulala. Faka nje ukhilimu amanqaku ama-5 abalulekileyo ebusweni ibunzi, izidlele, impumlo, isilevu emva koko usebenzise zombini izithupha esilevini. Khomba kwaye ubeke iitempile kumacala omabini. Emva koko sebenzisa ubhontsi wakho ngokuthe ngcembe Yijike ibe yimilo engu-V. Ke emva kokufikelela ezidleleni, yathambeka ngakumbi de kwaba sebunzi. Emva koko sebenzisa ubhontsi wakho ngokuthe ngcembe Massage ukuya kumgca weenwele. Le ndlela yindlela efuna ukuba sifudumele izidlele. Ukunceda ukuqinisa izihlunu zesidlele kunye nokunceda ukunciphisa ubunzima bobuso
6. Indlela yokunciphisa ubunzima bomzimba, sikuzisa namhlanje. Akunzima kangako, akunjalo? Nabani na onezinye iindlela ezintle, ungalibali ukusebezela ukuze uxelelane nabanye. Ngenxa yokuba siza kuphulukana nobunzima bobuso kunye ^^ hehe ^^